Portfolios – Ko Phyo
Doody Tooty Facebook App
Doody Tooty က Facebook App တစ်ခုပါ။ Mood Weather တို့ My mood တို့လိုမျိုးပဲ ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်ဖြစ်၊ လတ်တလော ဘာတွေလုပ်နေတာကို သင့်ရာပုံလေးတွေကို ရွေးပြီး Facebook မှာ update လုပ်လို့ရတဲ့ Application တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ရေးပြီး ဇာတ်​ကောင်လေးတွေ နဲ့ ပုံတွေကတော့ ကျွန်တော့် အစ်ကိုဖြစ်သူ မျိုးဟန်ထွန်း ဆွဲထားတာပါ။
Facebook မှာ Weather Mood ကို သုံးဖြစ်တာတော့ ကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် အသစ်တစ်ခုခုကို ရဖို့ နေ့တိုင်း ဝင်ကြည့်ရတာရယ်၊ တစ်ချို့ဆို credit နဲ့ ဝယ်ရတော့ စိတ်ထဲ သိပ်သဘောမကျဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူကို ပြောကြည့်တယ် အရုပ်ပုံလေးတွေ ဆွဲပေးနိုင်မလားဆိုတော့ သူကလဲ ရတယ်တဲ့။ သူ့ဆီက နမူနာ ပုံလေးအနည်းငယ်ရပြီး ရေးကြည့်တော့ နာရီပိုင်းလေးပဲ ကြာတယ်။ ရေးပြီးတော့ ပထမဆုံး hosting ပေါ်တင်၊ နောက်တော့ Facebook မှာ တင်လိုက်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး သုံးတဲ့သူ တော်တော်များလာလို့ ထင်တယ်။ Facebook automatic spam detector က spam app ထင်ပြီး block လုပ်လိုက်တယ်။
အဲဒါ့နဲ့ Facebook help center ကို ဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြည့်ပြီး spam app မဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြတော့မှ သူတို့ဆီက မေးလ်ပြန်ရတယ်။ အဲဒိမေးလ်ထဲမှာ Facebook က algorithm တစ်ချို့သုံးပြီး spam မဖြစ်အောင်လိုက် block နေတာသိလိုက်တယ်။
ပထမတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်တဲ့ Facebook style interface ပုံစံနဲ့ စခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က အစ်ကိုဖြစ်သူက ဒီဇိုင်းပြောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ အသစ်ပြန်ရေးပြီး improvement တစ်ချို့လုပ်ခဲ့တယ်။
ပုံအသစ်တွေကိုလဲ နေ့စဉ်တိုင်းတင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ Facebook မှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ လက်တို့လိုက်ပါဦး။
Facebook App: http://apps.facebook.com/doodytooty/
Categorized as Portfolios Tagged Facebook
Smiley Myanmar isaEnglish – Myanmar dictionary and Zawgyi font installation app for BlackBerry smartphone devices. It comes with the font installer so that you can read Myanmar text written with Zawgyi in any apps like BBM, Facebook, Twitter, Browser, etc. It uses Ornagai Dictionary API (thanks to Htain Linn Shwe) to get dictionary data through internet connection (wi-fi or BIS). Smiley Myanmar is released under the property of MountMandalay and it is developed by Me and designed by My brother, Myo Han Htun.
Open up your BlackBerry browsers and browse the following url
Download the latest (MMDictionary 0.9.2.480)
Allow and set permissions if your BlackBerry device asks you.
Download via BlackBerry Desktop Software
If you need application loader file to install through BlackBerry Desktop Software, please download here.
Using Smiley Myanmar
Once you have installed, you can find it under downloads or applications folder.
Open it for the first time. When you see the first screen, press BlackBerry menu.
Click ‘Setting’, then you will see next screen.
In next screen, click ‘Install’ to install Zawgyi Font.
Type something you want to look up.
*** You must have BlackBerry Internet plan or Wi-Fi turn on to use this app.
BlackBerry OS5and OS 6
BlackBerry 8900 (OS 5)
BlackBerry 9630 (OS 5)
Web site: mountmandalay.net
Categorized as Portfolios Tagged Blackberry